Godina Harargee Lixaa Aanaa Doobbaa keessatti maqaa deeggarsa maatii hacaaluu – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsGodina Harargee Lixaa Aanaa Doobbaa keessatti maqaa deeggarsa maatii hacaaluu
Godina Harargee Lixaa Aanaa Doobbaa keessatti maqaa deeggarsa maatii hacaaluu
BB$: Adoolessa 26/2020
Godina Harargee Lixaa Aanaa Doobbaa keessatti maqaa deeggarsa maatii hacaaluu hundeeysaatiif je’uun maallaqa Ummatarraa guuraa jiran je’ame.
Bulchiinsi Aanaa Doobbaa jiraattota Aanichaa dirqamaan, Namoota harka qalleeyyii USAID irraa deeggarsa argachaa jiraanis dirqamsiisaa jiraachutu himame.
Namoota gargaarsa karaa Seeftineetiin maallaqaa fudhatanis Maqaa Gargaarsa Maatii Haacaaluutin qarshii silaa argachuu qaban osoo hin kennamneef, irraa muraa jiran je’u jiraattonni.
Maallaqni Haawaasarraa guuramaa jiru kunis, nama tokkotti Qarshii/Birrii/100 tahuudha maddeen kan gabaasan.
Oromiyaa Kutaalee gara garaa keessatti maqaa Qabeenya Saba Amaaratu gubate, maallaqa kafalaa je’uun, Kaadiroonni Bilxiginnaa hawaasa rakkisaa akka jira kallattii gara garaatin odeessi nu dhaqqabaa jira.
Itti GaafataamaaJaarmayaa fi Siyaasaa ABO obbo Gaashuu Lammeessaa waliin, muddama dhaabni keessa jiru irratti marii kallattiin goonu hordofaa.
Muddama ABO yeroo ammaa keessa jiru.
Waajjira ABO Gullalletti maaltu deemaa jira?
Abiy Ahmed Ali & his friends did not establish a dictatorship in order to safeguard a revolution; they are using the #OromoProtests movement in order to establish a dictatorship. #AbiyMustGo #FreeAllPoliticalPrisoners #OromoRevolution
Akkuma amma dura barreesse waraanni Abiy diigamuutti jira.
“poolisoota Oromiyaa kanneen dhiyoo kana leenjii irraa turan keessa bayyeen isaanii guyyaa hacaaluun du’ee san hokora kaaftan jechuun poolisin feedarala mana hidhaatiti hiraarsa jirti. maatiin polisoota kana yeroo irratti bilbilan bilbili isaanii cufaadha, warreen isaan waliin jiran irratti yeroo bilbile gaafanne “nuti waan isaan balleessan hin beeknu dhufaniiti polisiin feedarala nu bira guurani fudhani kutaniin” nuun jedhan. maatiileen isaanii waan arraa guyyaa tokko hirriba hin rafne. yoo ajjeefamaniis wanti beekamu hin jiru.
bayyeen isaanii guyyaa Arraa Eybifamani jiran,warreen hafan garuu mana hidha keessatti hafan. kanaafuu nuuf iyyaafadha. Adaraa”
Jaal Daawud Ibsaa Maal Keessa Jira?
Adda Bilisummaa Oromoo: ‘Naannoo mana jireenyaa Daawud Ibsaa humni hidhate buufatee jira’